/ När du blir arbetslös
Marka aad tahay bilaa shaqo
Marka aad tahay bilaa shaqo waa inaad iska diiwaan-gelisaa dhankayaga maalinta ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay. Markaasi waxaad codsan kartaa qasnada shaqo la'aanta oo waxaanu kaa taageeri karnaa inaad hesho shaqo.
Sidan ayaa la isu diiwaan-geliyaa
Is diiwaan-geli maalinta ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay
Waa muhiim inaad iska diiwaan-geliso dhankayaga ugu dambeyn maalinta ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay. Markaasi waxaad heli kartaa qasnada shaqo la'aanta laga bilaabo maalinta ugu horeysa ee shaqo la'aanta.
Marka aad iska diiwaan-geliso dhankayaga maalint augu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay waxaad xitaa haysanaysaa dakliga ku salaysan gunada xanuunka, SGI.
Buuxi dhamaan macluumaadka aad awoodo. Markay sii badato waxa aanu kaa ognahay ayaanu si dhakhso ah kuu caawin karnaa.
Sidan ayaad isu diiwaan-gelinaysaa
Waxaad buuxinaysaa macluumaadka ku saabsan tusaale ahaan waxbarasho, shaqo hore, aqoonta, noocyada shaqo ee aad raadinayso iwm. Isa sii diyaari adigoo soo qaadanaya shahaado, caddayn, cv iyo wixi kale.
Waxaad ugu dambeyn ballansanaysaa wakhtiga kulankaaga ugu horeeya ee aad nala yeelanayso. Waxaad badanaaba kala dooran kartaa kulan ka dhaca mid ka mid ah xafiisyadayada ama kulan ah dhanka telafoonka ama fiidyo.
La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta
Qasnada shaqo la'aanta waa lacag aad heli karto marka aad tahay bilaa shaqo. Inta ay leegtahay lacagta aad heli kartaa waxay ku xirantahay waxyaabo ay ka mid yihiin inta aad horey u soo shaqaysay iyo haddii aad xubin ka tahay qasnad shaqo la'aan.
La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta oo codso magdhabkan. Sida ugu sahlan ee aad u samaynaysaa waa iyadoo loo maro in la galo bogga intarnatka ee qasnadaada shaqo la'aanta.
Haddii aanad xubin ka ahayn mid kamid ah qasnadaha shaqo la'aanta waxaad si kastaba ha ahaatee fursad u leedahay inaad hesho wax magdhab ah.
Qasnada shaqo la'aanta
Isu diyaari kulanka aad nala leedahay
Ka hor kulankaaga ugu horeeya waxaa fiican inaad bilowdo inaad is diyaariso oo keligaa sii qorshayso. Markaasi kulankeena ugu horeeyaa wuxuu yeelanayaa micno. Waxaad tusaale ahaan samayn kartaa inaad
eegto oo dib u cusboonaysiiso cv-gaaga
soo qaadato shahaadooyinkaaga iyo caddaymahaaga
ka fikirto waxa aad doonaysid inaad ka shaqayso
Maxaa dhaca xilliga kulankan?
Kulankaaga ugu horeeya ee aad nala leedahay adiga iyo shaqo dhexdhexaadiye ayaa isla eegaya waxyaabahan:
noocyada shaqo ee aad raadinayso
sida suuqa shaqadu u eegyahay
nooca taageero ee aad naga heli karto
sida aad samaynayso si aad u gaarto hadafkaaga.
Sidee ayaan samaynayaa haddii aan u baahdo in aan badelo wakhtiga ballanta kulankayga?
Si loo baddelo wakhtiga ballanta kulankaaga waxaad dhanka telafoonka kula xiriiraysaa xafiiskaaga shaqado. Qaab kale uma badeli kartid wakhtiga balantaada.
Miyaan is diiwaan-gelin karaa bilaa aqoonsi elaktaroonig ah?
Haddii aanad haysan aqoonsiga elaktarooniga ah waxaad is diiwaan-gelintaada ku diyaarin kartaa dhanka bogga intarnatka. Markaasi waxaad ku gelaysaa magacaaga isticmaale ahaan iyo lambarka sirta ah. Waxaad ka dib u baahantahay inaad na soo booqato si shaqo raadiye ahaan laguu diiwaan-geliyo. Ma sii samayn kartid balan ka hor. Maalintaada diiwan-gelinta ee ugu horeysa waxaa xisaabsan maalintii aad si shakhsiyan ah noo soo booqatay.
Waxaad u baahantahay inaad na soo booqato gudaha 14 maalmood laga bilaabo markii aad macluumaadkaaga ku soo dirtay bogga intarnatka. Haddii taas aanad samayn si atoomaatik ah ayaa loo masaxaa macluumaadkaaga.
Miyaan is diiwaan-gelin karaa xilli ka horeeya maalinta ugu horeysa ee aan bilaa shaqo ahay?
Haa. Laakiin markaasi waxaad u baahantahay inaad na soo booqato maalinta ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay si aanad u waayin magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta.
Waa maxay dakliga ku salaysan gunada xanuunka, SGI?
SGI-gaagu wuxuu raad ku yeeshaa badnaanta inta ay leegtahay tusaale ahaan gunada xanuunka iyo gunada waalidka. Waa Qasnada Caymiska kuwa xisaabiya SGI-gaaga. La xiriir Qasnada Caymiska haddii aad hayso su'aalo ku saabsan SGI-gaaga.
Maxaa i khuseeya marka aan helo magdhabka xilliga shaqo dhimista?
Haddii aad heshay magdhabka xilliga shaqo dhimista adigoo aan bilaabin shaqo cusub waxaad u baahantahay inaad dhankayaga iska diiwaan-geliso shaqo raadiye ahaan. Ka fikir inaad is diiwaan-geliso ugu dambeyn maalinta ugu horeysa ee ka dambeysa markii shaqadaadu dhamaatay, haddii kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad waydo SGI-ga aad ku leedahay Qasnada Caymiska.
Ma heli kartid magdhabka qasnada shaqo la'aanta xilliga wakhtiga wata magdhabka shaqo dhimista. La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta markaasi iyagaa xisaabinaya inta uu leegyahay wakhtiga magdhabkaaga shaqo dhimistu uu u dhigmo dhanka wakhti shaqo ahaan. Waa ugu horeyn marka wakhtiga magdhabka shaqo dhimistu dhamaado marka aad fursad u leedahay inaad magdhab ka hesho qasnada shaqo la'aanta.
Maxay tahay inaan ka fikiro haddii shaqada la iga dhimo ama la iga eryo?
Xagayaga iska diiwaan-geli si aad u hesho caawimaada helida shaqo. Xitaa la xiriir ururkaaga shaqaalaha si loo ogaado haddii aad ka heli karto taageero iyo haddii ay saas tahay ururka ay tahay inaad la xiriirto. Xafiiska shaqada, ururada amaanka shaqaalaha iyo shaqo bixiyuhu badanaaba way wada-shaqeeyaan si ay kuu siiyaan taageero fiican.
Anigu waan ka baxay shaqo la'aanti, sidee ayaan uga baxayaa diiwaankan?
Na soo wargeli sida ugu dhakhso badan markaad hesho shaqo ama bilowdo inaad wax barato. Waxaad xitaa u baahantahay inaad wargeliso qasnadaada shaqo la'aanta si aad u hesho warbixinta ku saabsan sida ay tani raad ugu yeelanayso magdhabkaaga. Ka fikir in ay waajib kugu noqon karto inaad dib u bixiso lacag haddii aanad u sheegin qasnadaada shaqo la'aanta. Waxaad samaynaysaa wargelinta hawlahaagi wakhtigii ugu dambeeyay ee shaqo la'aanta sidii caadiga ahayd.
Tilmaamaha iyo talooyinka in la raadiyo shaqo
Bilow inaad raadiso shaqo.
Tilmaamo iyo talo